Warshada Rugta & Foornada - Soo-saareyaasha Shiinaha & Foornooyinka, Alaab-qeybiyeyaasha
DRK645B Uv qolka cimilada u adkaysta
Qolka cimilada u adkaysta wuxuu u adeegsadaa laambada loo yaqaan 'fluorescent UV UV' isha iftiinka wuxuuna ku sameeyaa tijaabinta isbadalka cimilada maadada isagoo u ekeysiinaya shucaaca shucaaca iyo uumiga qorraxda dabiiciga ah, si loo helo natiijada cimilada.
DRK-GHP Qalabka korontada ku shaqeeya ee heerkulka joogtada ah (Cusub)
Waa kuleyliyaha heerkulka joogtada ah ee ku habboon cilmi baarista sayniska iyo waaxaha wax soo saarka warshadaha sida caafimaadka iyo caafimaadka, warshadaha dawooyinka, bayoolaji iyo cilmiga beeraha ee beertida bakteeriyada, halsano iyo baaritaanka heerkulka joogtada ah.
DRK-GHP Qalabka korontada ku shaqeeya ee heerkulka joogtada ah
Taxanaha kiciyaha Light-DRK-HGZ (Cusub)
Badanaa waxaa loo isticmaalaa biqilka dhirta iyo seedling; beerista unugyada iyo noolaha; waxtarka iyo baaritaanka gabowga ee daawada, alwaaxda, qalabka dhismaha; heerkulka joogtada ah iyo baaritaanka fudud ee cayayaanka, xayawaanka yaryar iyo ujeedooyin kale.
Waa qalab tijaabo ah oo ku habboon wax soo saarka iyo waaxyada cilmi baarista cilmiga sayniska sida injineernimada hidaha, daawada, beeraha, dhirta, sayniska deegaanka, xannaanada xoolaha, iyo wax soo saarka biyaha.
DRK-LHS-SC qolka joogtada ah ee heerkulka iyo qoyaanka
Waxay ku habboon tahay in lagu tijaabiyo tayada wax soo saarka sida elektaroniga, qalabka korontada, taleefannada gacanta, isgaarsiinta, mitirrada, gawaarida, badeecooyinka caagga ah, biraha, cuntada, kiimikooyinka, qalabka dhismaha, daryeelka caafimaadka, aerospace, iwm.
Taxanaha kicinta DRK-LRH Biochemical
Waa qalab tijaabo muhiim u ah hay'adaha cilmi baarista sayniska, jaamacadaha, unugyada wax soo saarka ama sheybaarada waaxda ee bayoolajiga, injineernimada hidaha, daawada, caafimaadka iyo ka hortagga cudurrada faafa, ilaalinta deegaanka, beeraha, dhirta iyo xannaanada xoolaha.
Foornada-qalajinta taxanaha ah ee 'DRK-6000'
Foornada qallajinta faakiyuumka waxaa si gaar ah loogu talagalay qalajinta xasaasiyadda kuleylka, si fudud u burbursan uguna fudud oksaydhka. Waxay ku ilaalin kartaa heer faaruq ah oo faaruq ah qolka shaqada inta lagu jiro shaqada, waxayna ku buuxin kartaa gudaha gaaska aan firfircooneyn, gaar ahaan walxaha qaarkood oo isku dhafan.
DRK-BPG taxane foornada qallajinta qaraxa qumman
Foornada qaraxa toosan ee ku habboon noocyada kala duwan ee alaabada ama qalabka iyo qalabka korontada, aaladaha, qaybaha, elektarooniga, korantada iyo baabuurta, duulista, isgaarsiinta, caagagga, mashiinada, kiimikooyinka, cuntada, kiimikooyinka, qalabka iyo qalabka xaaladaha heerkulka joogtada ah ee heerkulka.
Taxane DRK-HGZ Light Incubator
Foornada Qallajiye Qallajiye Foornada
1.Qiyaas ahaan shaashad ballaaran oo LCD ah, noocyo badan oo xog ah oo hal shaashad ah, iskudhafka hawlgalka qaab-menu, Way fududahay in la fahmo oo la shaqeeyo. Habka xakamaynta xawaaraha marawaxadaha ayaa la qaatay, xawaaraha dabaysha ayaa si xor ah loogu hagaajin karaa iyadoo la raacayo tijaabooyin kala duwan. 3. Wareegga marinka hawada ee iskiis loo soo saaray
DRK-HQH taxanaha qolka cimilada macmalka ah
Waxaa loo isticmaali karaa biqilka dhirta, taranka abuurista, nudaha iyo beerista microbial; cayayaanka iyo taranka xoolaha; BOD go'aaminta baaritaanka biyaha iyo tijaabada cimilada macmalka ah ujeedooyin kale.